गाउँको बिचबाट सडक माग्दा सार्वजनिक मुद्दा ! • Makalu Khabar
गाउँको बिचबाट सडक माग्दा सार्वजनिक मुद्दा !
धादिङ, फागुन १ । अपायक ठाउँबाट सडक बन्न लागेको भन्दै गाउँको बिचबाट सडक लैजानुपर्ने माग गर्ने गाउँलेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाएको छ । धादिङबेंसी–तिप्लिङ सडकअन्तर्गत खनियाबास–२ मा सडक खन्न अवरोध गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सोमबार सडक खन्ने क्रममा सो क्षेत्रमा गाउँबासी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । सडक खन्न अवरोध गर्दा विकासको काममा अवरोध भएको भन्दै प्रहरीले पाँच जनालाई झर्लाङबाट पक्राउ गरेको थियो । अभियुक्तलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ध्रुवराज राउतले बताए ।